यी हुन् सस्तो मुल्यमा नेपाली बजारमा उपलब्ध कारहरु ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Auto News/यी हुन् सस्तो मुल्यमा नेपाली बजारमा उपलब्ध कारहरु !
काठमाडौं । नेपालमा कार किन्न धेरै मूल्य तिर्नु पर्ने हुन्छ । मुख्यत सरकारले लगाउँदै आएको भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट, सडक निर्माण दस्तुर, उच्च वार्षिक कर, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाईको ७० प्रतिशतसम्मको कर जस्ता कारण सामान्य आय भएका मानिसले कारको विषयमा सोच्न समेत सक्दैनन् ।यद्यपी मोटरसाइकलको प्रयोगबाट आफ्नो काम गर्दै आएका मानिसले आफ्नो आम्दानी केही बढेपछि भने सानो कारमा आँखा लगाउने गरेका छन् । यस्तोमा सामान्य कार किन्न चाहने मानिसलाई मध्यनजर गर्दै बिक्रेता कम्पनीहरुले कार उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
यस्तोमा मारुती सुजुकी, हुन्डाई, डाट्सन, रेनो र टाटाले बिक्री गर्दै आएका इन्ट्री लेवलका कारहरु मोटरसाइकल छाड्नेहरुको उपयुक्त रोजाइमा पर्न सक्छ ।अहिले मारुती सुजुकीको सबैभन्दा कम मूल्यमा कार किन्न चाहने ग्राहकले १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अल्टो खरिद गर्न सक्ने छन् । अल्टो मूल्यका हिसावले नेपालमा उपलब्ध सबैभन्दा सस्तो कार हो । अहिले सिजी मोटो कर्पले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा नै यो कार बिक्री गर्दै आएको छ । ७९७ सीसी क्षमताको अल्टो नेपाली सडकमा ट्याक्सी र निजी प्रयोगको लागि बिक्री हुँदै आएको छ ।
डाट्सनले नेपालमा बिक्री गर्दै आएको रेडी गो पनि सस्तो कारमा पर्छ । यसलाई कम्पनीले १९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मूल्य तोकेर बिक्री गर्दै आएको पायोनियर मोटो कर्पले अहिले अफर संचालन गरिरहेको छ । अफरमा किन्ने ग्राहकले यसको ६ महिनासम्म किस्ता तिर्नु पर्ने छैन भने नगद छुट र ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा यसलाई खरिद गर्न सक्ने छन् ।रेनोको इन्ट्री लेवल कार क्वीड पनि मोटरसाइकल छाड्नेको रोजाईमा पर्न सक्छ । माइक्रो एसयूभी थिममा आएको यो मोडल पनि निकै सफल ह्याचव्याक हो ।एड्भान्स अटोमोवाइलले बिक्री गर्दै आएको यो मोडलको सुरुवाती मूल्य २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
१.० लिटर इन्जिनमा उपलब्ध रहेको यो कार माइलेजको लागि समेत राम्रो मानिन्छ ।हुन्डाई सेन्ट्रो साना कार खोज्नेको लागि अर्को उत्कृष्ट विकल्प रहेको छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल्सले बिक्री वितरण गर्दै आएको सेन्ट्रोमा १.१ लिटर क्षमताको इन्जिन रहेको छ ।सेन्ट्रोको मूल्य अहिले २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकेर बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । यो २०२० मोडलको इन्ट्री लेवल भेरियन्टको मूल्य हो । कम्पनीले अहिले यसमा नगद छुट, एक वर्षसम्मको लागि मासिक किस्तामा ५० प्रतिशत छुट जस्ता अफर संचालन गरिरहेको छ ।
नेपाली सडकमा सर्वाधिक सफल मध्यको एक मोडल सेन्ट्रो मोटरसाइकल छाडेर कार किन्न खोज्नेलाई उत्तम विकल्प रहेको छ ।त्यसैगरि टाटा टियागो अर्को कम मूल्यमा उत्कृष्ट फिचर रहेको कार हो । १.२ लिटर इन्जिनमा आउने टियागोको मूल्य २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेर सिप्रदी ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएको छ । अहिले यो मोडल किन्न चाहने ग्राहकले २ लाख ५० हजार नगद छुट पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
लन्च भयो स्प्लिट सिट सहितको सबैभन्दा सस्तो बजाज पल्सर १२५ !!